Umenzi weSilinda oPhambili kunye neFektri | IsiTonghe
I-LUXMAIN ibambelela kubunkokeli kwezobuchwephesha, isebenzisa ngokungqongqo i-ISO9001: Inkqubo yolawulo lomgangatho ka-2015, kwaye yenze inkqubo yemveliso eyilinda epheleleyo yoxinzelelo oluphezulu, oluphakathi noluphantsi, kunye noxinzelelo oluphezulu lokusebenza kwesilinda sifikelela kwi-70Mpa. Imveliso isebenzisa i-JB / T10205-2010 esemgangathweni, kwaye kwangaxeshanye yenze ulwenziwo olwenzelwe wena olunokuhlangabezana ne-ISO, i-DIN yaseJamani, i-JIS yaseJapan kunye neminye imigangatho. Ukucaciswa kwemveliso kugubungela uluhlu lobungakanani obukhulu ngobubanzi beesilinda ezingama-20-600mm kunye nokubetha okungama-10-5000mm.
Le nkampani mayixhotyiswe amaziko machining CNC, CNC lathes, lathes ezinkulu, CNC oomatshini bokusila, grinders ezinkulu, oomatshini ipolishi, iirobhothi ukuwelda kunye nezinye CNC kunye nezixhobo jikelele processing, kwakunye ezintathu-nokulungelelanisa izixhobo zokulinganisa, iibhentshi uvavanyo hydraulic kunye nolunye uvavanyo izixhobo. Imveliso yonyaka ye-10,000 esemgangathweni kunye neesemigangatho engacwangciswanga yesilinda kunye neesilinda ze-servo, i-R & D kunye namandla okuvelisa asetyenziswa kakhulu kubuchwephesha, ukuvelisa iimoto kunye nolondolozo, oomatshini bokwakha, oomatshini bezolimo, ukuveliswa kwemizi-mveliso ngokubanzi kunye nobunjineli bobuchwephesha.
Ulwenziwo lobungcali kukubeka imveliso kwiiLUXMAIN iisilinda.
1. Isilinda esikhethekileyo se-servo esenzelwe izixhobo zovavanyo lokulinganisa lwendlela kunye neenqwelomoya zokulayisha inqwelomoya ineemeko zomsebenzi ezinzima, ukuchaneka okuphezulu, kunye namandla aphezulu okudinwa.
2. Isilinda enkulu yokuqinisa ilungele ii-bulldozers, abembi bezinto zakudala kunye nabanye oomatshini bokwakha abakhulu. Iimeko zokusebenza zinzima kwaye zinzima, kwaye ukutywina kunye neepropathi zoomatshini zesilinda ziyafuna.
3. I-LUXMAIN ngumenzi wokuqala wasekhaya wase-China wesixhobo sokulinganisa esizenzekelayo esixhasa iisilinda kunye nezikhululo zombane zombane ezisebenza ngombane ngoxinzelelo olusebenzayo lwe-70Mpa.
Egqithileyo Iposti ephindwe kabini yokunyusa i-L6800 (A) enokusetyenziselwa ulungelelwaniso lwamavili amane
Okulandelayo: Series New imoto ibhetri lift itroli L-E70
Isilinda esisebenza kabini
Isilinda seHydro Pneumatic
Isilinda esibambeleyo esinye
Isilinda esenziwe ngetelescopic
Bopha Intonga Isilinda
Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba, Isilinda esibambeleyo esinye, Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto, Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi, Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto,